Okuqukethwe Kwakho Kuyanuka Ngoba Kulahlekile Lezi Zinto | Martech Zone
Okuqukethwe Kwakho Kuyanuka Ngoba Kulahlekile Lezi Zici
NgoLwesithathu, Septemba 9, 2015 NgoLwesithathu, Septemba 9, 2015 Douglas Karr
Umbiko wemboni ngemuva kombiko uyaqhubeka nokuveza iqiniso lokuthi ukubaluleka kwe-hyper kanye nokwenza ngezifiso kuyizikhiye eziphelele zokwanda kwamazinga okuguqulwa. Ngakho-ke kungani abathengisi bokuqukethwe beqhubeka nokubhala i-drivel ejwayelekile efana ne-drivel yawo wonke umuntu? Izolo ebusuku ngenze isethulo endaweni yangakini Sparks umcimbi futhi ngawubiza:
Okuqukethwe kwakho kumunca. Impela Njengokuthi Ubufuna.
Iphuzu lami ngesethulo bekungekhona ukweyisa amandla abantu okubhala okuqukethwe; bekungukugxeka ikhono labo lokwenza bhalela okuqukethwe izilaleli zabo. Sivame ukubuyela emuva njalo ekubhaleni okuqukethwe siyakholwa kubalulekile, kepha lokho kuxhuma kuphela engxenyeni yezithameli zethu zizonke.
Inkinga yethu ukuthi izilaleli zethu zehlukene. Amathemba amabili anabantu abafanayo azoba nezinqubo eziningi ezahlukahlukene zokuthuthukisa ubudlelwano nenkampani yakho. Asithambekele ekubhekeni lokho.
Izinto ezi-5 Zokuthuthukisa Okuqukethwe Kwakho
Khulisa Ukuqaphela - ngokungeza isithombe, umsindo, noma ividiyo uzokwandisa umthelela nokuqonda kwendatshana oyibhalayo.
Yenza Kwabelwane - ukuthuthukisa okuqukethwe ukwakha inani labafundi uma bekuhlanganyela kuyisu elimangalisayo. Siza abafundi bakhulise inethiwekhi yabo, basize abafundi bathuthukise ubunikazi babo, basize abafundi ukuthi babandakanyeke ngokwabelana ngokuqukethwe nomphakathi wabo, noma ubazise ngesizathu abazosaba ngoba banendaba.
Izinqumo Zokusekela - abanye abafundi bathinteka ngokuthembana, amaqiniso, ukusebenza kahle, umuzwa wokuhlanganiswa kwakho. Okuqukethwe okulinganiselayo okuqukethe zonke lezi zinto kuzoxhumana nabafundi abaningi.
Isenzo Sokukhuthaza - faka okuqukethwe okushayela ukukholisa - ukuxhumanisa, ukuphindaphinda, ukuvumelana, ukusweleka, ukuvumelana, negunya.
Yenza ngokwezifiso - abantu abayiphenduli futhi bayicime impilo yabo lapho befika noma bephuma emsebenzini. Ukuthengwa kwebhizinisi kuthonywa abangani, umndeni, kanye nentuthuko yethu. Ukuthengwa komuntu siqu kunomthelela emsebenzini wakho. Ukuthengwa kwemoto, ngokwesibonelo, kungathonywa ukukhathazeka nge-mileage kagesi yokuhamba okude.
Ngokweqiniso, senze ukubuyekeza nenkampani ye-e-commerce izolo. Banokugcinwa kwamakhasimende okumangalisayo namazinga aphezulu okuguqulwa, kepha ngokuhamba kwesikhathi babe nesikhathi esinzima sokuthola amakhasimende amasha. Lapho sixoxa nabo, into yokuqala abasitshela yona ukuthi inkampani yabo ihluke kanjani. Babengama-100% baseMelika. Iningi lezithako zomkhiqizo wabo zazenziwe ngokwaseMelika (ezinye izithako zazingatholakali lapha). Baphendula izingcingo zabo ngalo lonke ucingo. Futhi bakha indawo yabo yokugcina impahla ngo-100%!
Ngiyabona ukuthi lesi yisimo esibi kakhulu, kepha konke abebeziqhenya ngakho ngenkampani yabo bekunzima noma bekungenakwenzeka ukukuthola kuwebhusayithi yabo! Kuthiwani uma siguqula okuqukethwe kwabo ngokulandelayo:
Faka i- isithombe yesikhungo ukuthinta isivakashi ngokushesha nje lapho befika esizeni.
Yabelana Izindaba ekutholeni ukuzimela kwamandla. Isibopho senhlalo nezemvelo siyimbangela abafundi abaningi abazokwabelana ngayo.
Faka amaqiniso embonini, ama-infographics, amaphepha amhlophe, ubufakazi, nezifundo zamacala ukusiza ukuxhasa izivakashi izinqumo.
Iklayenti selivele linokunikezwa kokuqala kokuthunyelwa kwamahhala nesaphulelo. Mhlawumbe ukwengeza usuku lokuphelelwa yisikhathi kungamkholisa umuntu ngokwenza lokho akunikelayo kuntula.
Laba bantu babenothando! Kungani ungafaki amavidiyo abhalwe kakhulu ngomlando wenkampani, insizakalo yamakhasimende emangalisayo, namanye amaphrofayili ahlukile wabasebenzi? Iyaxhuma Uqobo nezethameli zizoshayela ukuguqulwa.
Futhi, okukholelwayo kubalulekile kumkhiqizo noma kusevisi yakho akusikho ukuthi iklayenti lakho likholelwa ukuthi libucayi. I-ejensi yethu ijwayele ukugxila ekuguqulweni. Kepha kwesinye isikhathi amaklayenti athanda kakhulu ikhwalithi yokuqukethwe esikunikezayo. Leyo yinto okufanele siyikhumbule njengoba sibhala okuqukethwe okuthuthukisa inkampani yethu!
Tags: cognitionukwenza isinqumboukuzenzelaukukholisaukwabiwa
Ungakwakha kanjani okuqukethwe okwabelwanayo
Ukuthola Umuntu Wakho Emhlabeni Ominyene